အေ.ကြာေ.သနေတဲ့ဖခင်ကို အချိန်ပြည့်ဂရုစိုက်နိုင်အောင် တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာ ခေါ်ယူပြုစုပေးနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေး - Top Cele News
Top Cele News
အေ.ကြာေ.သနေတဲ့ဖခင်ကို အချိန်ပြည့်ဂရုစိုက်နိုင်အောင် တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာ ခေါ်ယူပြုစုပေးနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေး
Team Ag · Posted on June 2, 2021
Guo Shijunအမည်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားလေးကတော့ တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရယူဖို့ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကို လုံးဝလက်မလ.ွတ်ခဲ့တဲ့အပြင်၊ အေ.ကြာေ.သနေတဲ့ ဖခင်နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးမေ.ကာင်းတဲ့ မိခင်တို့ကိုပါ ပြုစုစောင့်ရှောက်နေခဲ့သူပါ။ Guo Shijunကတော့ တက္ကသိုလ်မှာ
အတော်ဆုံးကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အပြင် ကြိုးစားအားထုတ်လွန်းတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်တာမို့ မလွဲမရှောင်သာတော့ဘဲ တက္ကသိုလ်ဖက်က သူ့ရဲ့ဖခင်ကို အဆောင်မှာခေါ်ယူနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ Shijunရဲ့မိသားစုဟာ အတော့်ကိုဆ.င်းရ.ဲပြီး ငယ်ဘဝကလည်းအတော်ကို ခ.က်ခ.ဲခဲ့ရတာပါ။
မိခင်ဖြစ်သူကလည်း ဦးနှောက်အေ.မြှးရေ.ာင်ေ.ရာဂါခံစားခဲ့ရပြီးနောက် စိတ်ကျန်းမာရေးခ.ျို့တ.ဲ့နေတဲ့ သူတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူကသာ မိသားစုကိုကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ Shijunဟာ top studentတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။
သို့ပေမယ့်လည်း လုပ်ငန်းခွင့်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူက မေ.တ်ာတ.ဆမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ အေ.ကြာေ.သသွားခဲ့ရပါတယ်။ အဘိုးအဘွားတွေက မိခင်ဖြစ်သူကို စောင့်ရှောက်ပေးထားပေမဲ့ ဖခင်ကိုထပ်ပြီး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ ယခုလို ကျောင်အဆောင်မှာဖခင်ကို
ခေါ်ထားပြီး Shijunက ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေရတာပါ။ ကျောင်းစရိတ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကို သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆွေးမျိုးထံမှေ.ချးငှ.ါးနေရတာပါ။ ဒါတောင် စားစရိတ်နဲ့ မိဘတွေရဲ့ဆေးကုသစရိတ် မပါရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် Scholarshipရအောင် ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်း
ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘဝနဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို လုံးဝအလျော့မပေးတဲ့ Shijunက “ဘွဲ့ရပြီးရင်တော့ ကျွန်တော့်ဘဝကဒီထက် ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဆိုပြီး ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်ကို လေးစားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးပါပဲလေ။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်.
Guo Shijunအမညျရှိတဲ့ ကြောငျးသားလေးကတော့ တက်ကသိုလျကနဘှေဲ့ရယူဖို့ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အိမျမကျကို လုံးဝလကျမလ.ှတျခဲ့တဲ့အပွငျ၊ အေ.ကွာေ.သနတေဲ့ ဖခငျနဲ့ စိတျကနျြးမာရေးမေ.ကာငျးတဲ့ မိခငျတို့ကိုပါ ပွုစုစောငျ့ရှောကျနခေဲ့သူပါ။ Guo Shijunကတော့ တက်ကသိုလျမှာ
အတျောဆုံးကြောငျးသားဖွဈတဲ့အပွငျ ကွိုးစားအားထုတျလှနျးတဲ့ကြောငျးသားဖွဈတာမို့ မလှဲမရှောငျသာတော့ဘဲ တက်ကသိုလျဖကျက သူ့ရဲ့ဖခငျကို အဆောငျမှာချေါယူနထေိုငျခှငျ့ပွုခဲ့တာပါ။ Shijunရဲ့မိသားစုဟာ အတေျာ့ကိုဆ.ငျးရ.ဲပွီး ငယျဘဝကလညျးအတျောကို ခ.ကျခ.ဲခဲ့ရတာပါ။
မိခငျဖွဈသူကလညျး ဦးနှောကျအေ.မွှးရေ.ာငျေ.ရာဂါခံစားခဲ့ရပွီးနောကျ စိတျကနျြးမာရေးခ.ြို့တ.ဲ့နတေဲ့ သူတဈယောကျလိုဖွဈနခေဲ့တာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဖခငျဖွဈသူကသာ မိသားစုကိုကြှေးမှေးပွုစုစောငျ့ရှောကျခဲ့လို့ Shijunဟာ top studentတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ရတာပါ။
သို့ပမေယျ့လညျး လုပျငနျးခှငျ့မှာ ဖခငျဖွဈသူက မေ.တျာတ.ဆမှုနဲ့ကွုံတှခေဲ့ရလို့ အေ.ကွာေ.သသှားခဲ့ရပါတယျ။ အဘိုးအဘှားတှကေ မိခငျဖွဈသူကို စောငျ့ရှောကျပေးထားပမေဲ့ ဖခငျကိုထပျပွီး ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျပေးဖို့ မဖွဈနိုငျတော့လို့ ယခုလို ကြောငျအဆောငျမှာဖခငျကို
ချေါထားပွီး Shijunက ပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးနရေတာပါ။ ကြောငျးစရိတျအတှကျ လိုအပျတဲ့ငှကွေေးကို သူငယျခငျြးနဲ့ ဆှေးမြိုးထံမှေ.ခြးငှ.ါးနရေတာပါ။ ဒါတောငျ စားစရိတျနဲ့ မိဘတှရေဲ့ဆေးကုသစရိတျ မပါရှိသေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ Scholarshipရအောငျ ကိုယျတိုငျကွိုးပမျး
ခဲ့ပါသေးတယျ။ ဘဝနဲ့ ရညျမှနျးခကျြကို လုံးဝအလြော့မပေးတဲ့ Shijunက “ဘှဲ့ရပွီးရငျတော့ ကြှနျတေျာ့ဘဝကဒီထကျ ပိုပွီးအဆငျပွသှေားမယျလို့ ထငျပါတယျ”ဆိုပွီး ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ။ တကယျ့ကို လေးစားစရာကောငျးလှနျးတဲ့ လူငယျတဈဦးပါပဲလေ။ လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ.
© 2021 Top Cele News